गियरवाला साइकल किनेको ठ्याक्कै नौ दिन भएको थियो । साँझ कुपण्डोलस्थित आफ्नो अफिसबाट फर्किदा झमक्कै साँझ परिसकेको हुन्थ्यो । सडकभरी फैलिएको धुलोले कोठामा आइपुग्दा मेरो साइकललाई ढपक्कै ढाकिसकेको हुन्थ्यो ।
बिहान अबेरसम्म सुत्ने बानीले मलाई व्यस्त बनाएको थियो । म उठ्ने र अफिस जाने बेला एकैपटक हुन्थ्यो । रातको बाह्र बजेसम्म मैले कथा लेख्नका लागि समय छुट्याएको थिएँ ।
साइकल किनेको अठारौं दिन । अफिसबाट आफ्नो कोठामा फर्किरहेको थिएँ । रातले साँझलाई जबरजस्ती आफ्नो साङ्लोमा बाँधिसकेको थियो । अरु सवारी साधनले छरेको उज्यालोका आधारमा आफ्नो साइकललाई बिस्तारै कुदाइरहेको थिएँ बाटोमा ।
एक्कासी अँध्यारो भयो । घाम घण्टौं पहिले डुबेपनि क्षितिजले अलिकति उज्यालो छरिरहेको थियो । तर, एक्कासी अँध्यारो भयो । शहरका कुनै पनि बत्तीहरू बलेनन् । पोलका बत्तीहरू बलेनन् । सवारी साधनका व्यक्तिगत बत्तीहरू पनि बलेनन् ।
त्यसपछि बाटो पछ्याउन गाह्रो भयो मलाई । सवारी साधनहरूले आफ्नो रफ्तारलाई सुस्त बनाए । म ती साधनहरूको पछिपछि कुदिरहेको थिएँ । अर्थात साइकल कुदाइरहेको थिएँ । सडकका पेटीमा मुकुट लगाएका केही मान्छेहरू यताउता गरिरहेका थिए ।
मलाई घर जान हतार भइरहेको थियो । तर हेर्दाहेर्दै केही घरहरू गायब हुन थाले । सडक पेटीका केही घरहरू लापत्ता भए । घर हराएका जग्गाहरूमा पानीको सतह देखिएको थियो । मलाई अनौठो किसिमको डर लाग्न थाल्यो । मानौं, मैले भर्खरै आठ रेक्टरको भूकम्प गएको महसुस गरेको हुँ । होइन, तीनतले घरजत्रो सेतो पोशाक लगाएको ‘श्वेत मान्छे’ मेरै अगाडि उभिएको छ ।
यो एउटा अप्रत्याशित घटना थियो मेरा लागि । घरमा गएर एउटा यौनमनोविश्लेषणात्मक कथा लेख्ने योजना बुनेको थिएँ । अरु केही योजनाहरू पनि थिए । तर मलाई बाटोले अल्झनमा पारेको थियो । भर्खरै घर हराएझैं बाटो पनि हरायो भने के होला भन्ने भय मनमा नआएको पनि होइन ।
केही पर ट्राफिकको चेकिङ थियो । लेखिएको थियो – ‘बाटो बन्द छ । ट्रक बाहेक अरु सवारी साधन बैकल्पिक बाटो जान सक्नुहुन्छ ।’
नजिकै एउटा प्रहरी मेचमा बसेर मैनबत्तीको उज्यालोमा केही ट्रकहरलाई चेकिङ गरिरहेको थियो । नजिकै गएर सोधें – ‘सर, यो ट्रकमात्र चेक गर्नुको कारण के होला?’
‘कसैले उज्यालो हराउने मेसिन ट्रकमा लुकाएर शहर घुम्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’
नजिकैबाट एउटा ट्रक हुइँकेर गयो । म वैकल्पिक बाटो अगाडि बढें । रात छिप्पिसकेको थियो । जूनको उज्यालोले वातावरणलाई अलिकति भए पनि सन्तुलित बनाएको थियो । सडकका पेटीमा मुकुट लगाएका केही मान्छेहरू यताउता गरिरहेका थिए ।
बिस्तारै शहरका घरहरू औंलामा गन्न सकिने मात्र देखिन थाले । हामीले घर देख्ने ठाउँमा सङ्लो पोखरी देखिरहेका थियौं । पानीमा माछाहरू मात्र थिएनन्, भ्यागुताका बच्चाहरू पनि ट्यार्र ट्यार्र गर्दै कराइरहेका थिए । आँखाले देख्न सक्ने भेगभरीमा घरहरू हराइसकेका थिए । काठमाडौं पोखरी बनिसकेको थियो । बाटोहरू पुल जस्तै देखिएका थिए । हो, सडकका पेटीमा मुकुट लगाएका केही मान्छेहरू यताउता गरिरहेका थिए । मैले साइकल बेस्सरी कुदाएँ ।
लगभग पच्चीस मिनेट मैले पछाडि फर्केर हेरिन । साइकलको गति पनि कम गरिन । यतिबेला म आफ्नो कोठामा आउनुपर्ने हो ।
तर अगाडि कुनै घरहरू थिएनन् । उस्तै देखिने नौ ट्रक लस्करै राखिएको थियो । ट्रकका छेउमा थुप्रै ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ झण्डा उभिएका थिए । हजारौं मान्छेहरूको भेला थियो । यो भेलाको आशय बुझ्न नजिकै उभिएका एक वृद्धलाई सोधें ।
‘के को भेला हो?’
‘यहाँ आन्दोलनको तयारी हुँदैछ ।’
‘आन्दोलन ?’ – मैले आश्चर्य जनाएँ ।
‘हामी विश्व अँध्यारो हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा छौं ।’
म पङ्क्तिबाट केही पर उभिएँ । जूनको उज्यालोमा मैले केही मान्छेका टाउकाहरू प्रष्टसँग पढ्न सक्थें । पाइन्टको खल्तीमा राखेको मोबाइल निकालें । मोवाइलको समयलाई आधार मान्ने हो भने त्यतिबेला साँझको ६ बजिसकेको थियो । मेरो मोबाइलको वालपेपरमा एक कामुक युवतीको तस्बिर थियो । मैले आजसम्म ती युवतीलाई कतै देखेको थिइन ।
‘तपाईले त मेरो फोटोलाई आफ्नो वालमा राख्नुभएछ त ।’ – अप्रत्यासित प्रश्नले मलाई झस्कायो ।
‘सरी । मैले तपाईलाई चिनिन ।’ – आवाज पछ्याउँदै मैले सोधें ।
‘तपाई एउटा यौन मनोविश्लेषणात्मक कथा लेख्न चाहनुहुन्थ्यो । म त्यही कथाकी पात्र हुँ ।’
‘तर मैले कथा अझै सुरु गरेकै छैन । पात्र चयन र चरित्र चित्रण गरेकै छैन ।’ – मैले भनें ।
‘ऊ केही पाइला पर सरी । मोबाइलको वालपेपर पनि अलिकति स¥यो । भनिहालें नि, त्यहाँ अरु हजारौं मान्छेहरू जम्मा भएका थिए । उनीहरू उज्यालो उन्मुलनको आन्दोलनमा थिए ।
‘जागिर कस्तो चल्दैछ? युद्धकालमा त थुप्रै पत्रकारहरू मारिए भन्ने सुनिन्थ्यो ।’ – उसले आफैले मुस्कुराएर प्रश्न राखी ।
‘उज्यालो उन्मुलन गरेर के फाइदा छ? म यहाँ प्रश्न सोध्न आएको होइन । – मैले प्रतिप्रश्न गरें ।
‘प्रश्न सोधेर प्रश्न सोध्न आएको होइन भन्दिने? त्यसो भए किन आउनुभएको?’
‘बाटो बिराएर ।’ – मैले आँखा चिम्लें । खैर ! मेरा आँखा थाकेका थिए ।
उसको झोला नीलो रंगको थियो । झोलाबाटसादा कापी र पेन्सिल निकाली । केही सडकपेटी सहितको नक्सा बनाई । नक्सामा बाटोहरू प्रष्ट देखिन्थे । मेरो हातमा नक्सा थमाउँदै भनी – ‘यो नक्साले तपाईलाई बाटो खोज्न मद्दत गर्नेछ ।’
मैले नक्सा हातमा लिएँ ।
तपाईलाई युवती कस्ती थिई भन्ने लाग्ला । उसको अनुहार गोलो र गोरो दुवै थियो । आँखा टपक्क मिलेका थिए । आँखाका नानी निख्खर काला थिए । उसको हरेक अभिव्यक्तिमा कामुकता थियो ।
छुट्ने बेलामा मैले उसको नाम सोधें । मुस्कुराएर उसले नाम बताई । नाम त्यही थियो, जुन नाम मैले कथाका लागि छनोट गरेको थिएँ – ‘कुमारी’ ।
म साइकल कुदाएर अगाडि बढिरहेको थिएँ । जूनको उज्यालोमा पहिलोपटक यति बेस्मारी साइकल कुदाउनु परेको थियो । युवतीले दिएको नक्साका आधारमा कम्तिमा आधा घण्टा आफ्नो रफ्तारमा कुदिरहें ।
सडकका पेटीमा केही मुकुट लगाएका मान्छेहरू यताउता गरिरहेका थिए । अगाडि मान्छेको बाक्लो भीड थियो । एक युवाले आफ्नो कपाललाई आकाशतिर फर्काएको थियो । उसले आँखामा गाजल लाएको जूनको उज्यालोमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
‘कृपया यहाँ के भइरहेको छ, मलाई अपडेट गराइदिनोस् । म पत्रकार हुँ ।’ – मैले झट्ट साइकलको बे्रक लगाएर युवालाई सोधें ।
‘यहाँ उज्यालो उन्मुलनको आन्दोलनको तयारी हुँदैछ ।’ – उसले मलाई हेर्दैै नहेरी उत्तर दियो ।
‘म आत्तिएँ । युवतीले दिएको नक्सा पछ्याउँदा के म फेरि यही ठाउँमा आइपुगें? के यो काठमाडौं नै हो?
त्यहाँ भेला भएका कतिपय मान्छेका अनुहार हेरें । उनीहरूको अनुहारमा निराशाका लामा लामा तन्तुहरू सल्बलाइरहेका थिए ।
‘हामी भुलभुलैयामा अल्झिनु नै थियो ।’ – उही युवती मेरो छेउमा आएर उभिएकी थिई । उसले मलाई हेरेर अर्कोपटक मुसुक्क हाँसी । त्यतिबेला उसका दाँत टलक्क टल्केका थिए । ‘भुलभुलैया मतलब?’ – मैले पूरै ध्यान युवतीमाथि केन्द्रित गरें ।
‘हामी जसरी यो सृष्टिमा अल्झिएका छौं । जसरी हाम्रो राजनीति भुलभुलैयामा अल्झेको छ । मेरी आमालाई पनि केही त्यस्ता रोगहरूले अल्झाएका छन्, जुन रोगको कुनै निदान नै छैन ।’
‘तपाई को हो?
‘तपाईले एउटा कथा लेख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो कथामा मेरो चरित्र लेख्नुभएको थियो ।
‘कुन कथा? तर कथा मैले अझैसम्म सुरु नै गरेको छैन ।’
‘हो, तपाईले सुरु नै गर्नुभएको छैन । मैले कथा लेखिसक्नुभयो भनेकै छैन ।’
जूनको उज्यालोमा मान्छेहरू आन्दोलनको तयारीमा थिए । परबाट प्रहरीको भ्यान रन्किएर आयो । जम्मा भएका मान्छेहरू भाग्न थाले । लस्करै राखिएका नौ ट्रक छापा मा¥यो । ती सबैमा काँचको ऐना राखिएको थियो । ऐनाले काठमाडौंको उज्यालोलाई सञ्चय गरेर अर्कै ग्रहमा पठाएको प्रहरीको वाकीट्वाकीमा सुनिएको थियो । ट्रकभित्र राखिएका ऐनाको हत्यापछि भने काठमाडौंका सडक पेटीमा बत्तीहरू बल्न थाले ।
काठमाडौं अलिकति उज्यालो भएको थियो । केही हराउन बाँकी घरहरूमा पनि उज्यालो छरिएको थियो । अघिको भीडमा कसैले मेरो साइकल चढेर गएछ । मलाई भाउन्न छुटेर आयो ।
उक्त युवती र म मात्र बाँकी थियौं त्यो भेगमा ।
‘माफ गर्नुहोला, तपाई अघि भर्खर एक युवासँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो । उसैले तपाईको साइकल लगेको हुनसक्छ ।’
‘किनकि त्यो साइकल तपाईका लागि कुनै कामको थिएन ।’
‘हामी धेरै अपरिचित र थोरै परिचित छौं । कृपया तपाईले मलाई चिनेजस्तो व्यवहार नगर्नुस् ।’ – मैले हाँस्दै भनें ।
उसले मेरो बारेमा यसरी बताई – ‘तपाई परिवारको एक्लो छोरो हो । दश पास गर्दासम्म तपाईलाई कलाकार बन्ने मन थियो । आमाले सरकारी जागिरे बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । चारपटक तपाई प्रेममा पर्नुभयो । तर, यी सबै कुरा पूरा हुन सकेनन् । त्यसैले तपाईको तालु खुइलिएको छ । बुबाले माछापालन गर्नुभएको छ ।’
उसले यति भनिसक्दा हामी सडकपेटी हिँड्दै काठमाडौंको पूर्वी छेउ आइसकेका थियौं । मैले सोधें – ‘बुबाले माछा पाल्नुसँग के कुरा सम्बन्धित छ?’
‘तपाईका बुबाले पोखरीबाट निस्किन नसकेका माछाहरूलाई हेरेर कतिपटक आफ्नो चित्त बुझाउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो जिन्दगीलाई माछासँग तुलना गर्नुभएको छ । सायद बुबाको आँसुको स्वाद पोखरीका माछाले चाखेका छन् ।’
उसले मलाई माछाको पोखरीनेर ल्याइसकेकी थिई । केही थोपा आँसु मैले त्यही पोखरीमा चढाएँ बुबालाई सम्झेर ।
त्यसपछि हामी नजिकैको सङ्ग्रहालयमा पुग्यौं । सङ्ग्रहालयको बाहिर लेखिएको थियो – अजायब ।
‘अजायबमा तपाईलाई स्वागत छ । यो शब्दको अर्थ तपाईलाई थाहा छ । यदि थाहा छैन भने अन्त्यमा सोध्न सक्नुहुन्छ ।’ – हामीले ढोकामा पाइला राख्नै लागेको बेला स्वचालित मेसिनले भनेको थियो । मैले उक्त स्वचालित मेसिनलाई पुलुक्क हेर्दा ऊ मुसुक्क हाँसेको थियो ।
युवतीले सङ्ग्रहालयभित्रका केही स्थानहरूसँग परिचय गराई । कतै गाई बाँधिएका थिए । गाईका लागि छुट्टै बाथरुमको व्यवस्था थियो । उनीहरूले घाँस हैन, पाकेका केरा खान्थे ।
छेउमा एउटा बडेमानको सुँगुर थियो । उसले आफ्नो वरिपरि त खुबै सफा राख्थ्यो तर कहिलेकाहीँ गाईको ट्वाइलेटमा गएर फोहोर गरिदिन्छ भन्ने युवतीले सुनाई ।
सङ्ग्रहालयमा केही अनौठा कुराहरूको संयोजन थियो । जस्तो कि, सङ्ग्रहालयको बीचमा एउटा पोखरी थियो । पोखरीमा माछाहरू थिए । छेउमा एउटा धुपीको रुख थियो । रुखमा स्याउ, सुन्तला, अंगुर र कटहर फलेका थिए । रुखको ख्याल गर्न एउटा बाँदरलाई राखिएको थियो । बाँदरले बडो इमान्दारिताका साथ बोटको हेरचाह गर्ने कुरा युवतीले सुनाई । अँ, पोखरीका माछाहरू मलाई देखेर रुन थाले । हुनसक्छ, ती माछामध्ये केही माछाले मेरो बुबाको आँसुको रंग देखेका थिए ।
हामी सङ्ग्रहालयको माथिल्लो तल्लामा जाँदै थियौं । कुकुरहरूले नम्रताका साथ हामीलाई स्वागत गरे । युवतीले ती कुकुरलाई मेरो साथी भनेर चिनाई । कुकुरहरूले पुच्छर हल्लाए ।
पहिलो तल्लामा केही बाघहरू कसरत गर्दै थिए । उनीहरूलाई बिरालो बन्नुपर्ने उर्दी जारी थियो । मैले यो कुरा भित्तामा हेरेर पत्ता लगाएको हुँ । लेखिएको थियो – ‘तिमी बिरालो हौ भने बाघ बन । बाघ हौ भने बिरालो बन ।’
युवतीले मलाई कोठाभित्र लगी ।
गुलावी रंगले कलात्मक बनाएको कोठाको एक छेउमा मार्लिन मुनरोको तस्वीर झुण्डाइएको थियो । झ्यालबाट आएको जूनको प्रकाशले कोठालाई उज्यालो बनाउन सकिरहेको थिएन ।
युवतीले झ्यालनिर राखेको चुरोटको बट्टाबाट एउटा चुरोट निकाली । सल्काई । उडिरहेको धुवाँ समातेर बोत्तलमा राखी । मैले उसको नाम सोधें ।
‘दोश्रो पटक नाम सोध्नुको कुनै कारण होला तर मैले तपाईलाई आफ्नो नाम भनिसकेकी छु ।’
‘म अफिसबाट आइरहेको थिएँ । बाटोमा हिँड्दा हिड्दै रात प-यो । अब घर कसरी जाने होला?’ – मेरो आवाज अलिक सुकेर आयो ।’
‘आजको रात तपाई यहीं बस्दा हुन्छ । यो घर पनि तपाईको आफ्नै घर हो ।’
‘माफ गर्नुहोला । मैले आज एउटा कथा लेख्नैपर्ने छ ।’
‘घरहरू हराएको त तपाईले देख्नुभएकै होला । तपाईको आफ्नै घर पनि त हराएको हुनसक्छ ।’
‘घरहरू किन हराए ?’
भोलि सरकारी निर्णय आउला । प्रतिवेदन आउला । मलाई कसरी थाहा हुन सक्छ? यो कुनै दरवार हत्याकाण्ड पनि त होइन नि, न त कुनै वेपत्ता नागरिकको परिवार हो । प्रतिवेदन आउला किन घर हराए भन्नेबारेमा । – उसले एकैसासमा यो डायलग सुनाई ।
‘यसैपनि यो विश्वलाई चकित पार्ने घटना हो ।’ – मैले भनें ।
उसले आफ्ना कोमल हातले चुरोटको ठुटो निभाई । झ्याल बन्द गरी । कोठा पूरै अँध्यारो भयो । मलाई असहज महसुस भइरहेको थियो ।
‘ठीक छ, तपाई लजालु मान्छे हुनुहुँदो रैछ । म तपाईका लागि एउटा वाइन मगाउँछु ।’ – ऊ एक्कासी सङ्ग्रहालय थर्किने गरी हाँसी ।
मलाई पनि हाँसो लाग्यो ।
सङ्ग्रहालयमा रेष्टुँुरा पनि छ भन्ने कुराको मैले हेक्का गरेको थिइन । बरु मैले सङ्ग्रहालयको एक साइडमा राखिएका हजारौं किताब, अर्को छेउमा राखिएका भगवानहरूका आइटम आइटमका मूर्ति र पोखरीका माछाहरूलाई याद गरेको थिएँ ।
उसले फोन गरेर वाइन मगाई । एकैछिनमा २ वटा ककटेल वाइन आयो । वाइनको बोत्तलमा नेपालीमा लेखिएको थियो, ‘स्याउहरूको मिश्रणबाट बनेको रक्सी ।’
मैले बिहानदेखि केही खान पाएको थिएन । संयोगवश मैले एउटा वाइन पिउने सु–अवसर पाएको थिएँ । हामीले चियर्स गरेर वाइन पियौं । वाइन आधा पनि भएको थिएन । ऊ रुन थाली ।
‘किन रुनुभयो?’ – मैले डराएर सोधें ।
‘तपाईले मलाई वाइन पिउन सिकाउनुभएको थियो ।’
‘तर हामी त पहिलो पटक भेट भएका हौं ।’
‘माफ गर्नुहोला । पहिले पनि भेट भएका केही प्रमाण छन् मसँग ।’
अँध्यारो कोठामा केही जुनकिरीहरू आए । ती जुनकिरीहरूले कोठालाई उज्यालो पार्न खोजेको हुनसक्छ । तर जुनकिरीको उज्यालो आफ्नो पुच्छरमा मात्र अल्झिरहेको थियो ।
युवतीले फेरि अर्को कथा सुनाई – ‘यो भन्दा पहिले हाम्रो भेट भएको थियो । हामी एक औपचारिक कार्यक्रममा भेट भएका थियौं । तपाईले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । हरेक रात फोन गर्नुहुन्थ्यो । सायद हामी प्रेममा परेका थियौं । एकदिन मलाई भेट्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । भेट भएपछि हामी एउटा बन्द कोठामा गयौं । त्यो तपाईको आफ्नै कोठा थियो ।
सुन्दर कोठा, जहाँ मिलाएर राखिएका कुनै पनि वस्तु थिएनन् । अत्यन्तै अव्यवस्थित । तपाई मुस्कुराउनुभयो । म तपाईको प्यारमा परेकी हुनसक्छु । तपाईको ओछ्याननिर गएर म बसें । तपाईले मलाई फकाउन खोज्नुभयो । माफ गर्नुहोला, फसाउन खोज्नुभयो । त्यो दिन म बलात्कृत भएकी थिएँ । तपाईलाई सहमति जस्तो लागेपनि मैले वाध्यताले तपाईका कुरालाई आवेशमा आएर स्वीकार्नुपरेको थियो । तर मलाई त्यो स्मरण किन रमाइलो लाग्छ? मलाई त पीडा पो हुनुपर्ने हो त ।’
उसले यसरी आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्दा अनुहारको भाव हेर्न पाएको थिइन । म डराएँ । जुनकिरीहरू बिलाए । मेरो अवचेतन मनले कतै न कतै उसले भनेका कुरा सत्य हुन् कि भन्ने लाग्न थाल्यो ।
त्यसपछि उसले मलाई बलात्कार गरी । लामो समय हैन, नौ मिनेट । उसले मलाई बलात्कार गरेको भनिरहँदा मेरो दिमागमा पहिलो प्रेमको पात्र दिमागमा नाच्न थाल्यो ।’
त्यसपछि कोठा बिस्तारै उज्यालो हुँदै गयो । उसको अनुहारमा सन्तुष्टि देखिन्थ्यो । मेरो मनमा पनि एक प्रकारको सन्तुष्टि दगुरिरहेको थियो ।
हामीले वाइन लिइसकेका थियौं । उसले डिनर अर्डर गरी । आफ्नो फुकेको कपाल सुम्सुमाउँदै भनी – ‘यो समय मेरा लागि महत्वपूर्ण छ ।’
मलाई हाँसो लाग्यो ।
डिनर आइसकेको थियो । मलाई कुनै कुराको भय थिएन । त्यतिखेर मलाई कम्तिमा पनि एक मिनेटसम्म उसलाई चुम्बन गरिरहँु जस्तो भएको थियो । डिनरको प्लेटबाट फ्राइ गरिसकेको माछा उफ्रियो । मैले पकाइसकेको माछा यसरी बाँचेको पहिलोपटक देखेको थिएँ ।
‘तपाईलाई के भयो?’ – युवतीले माछातिर हेर्दै सोधी ।
‘तपाईको बुबाले कयौंपटक पोखरीमा आँसु झार्नुभएको थियो । तपाई आफ्ना बुबाका आँसु पिउँदै हुनुहुन्छ ।’ – माछाले मतिर हेर्दै भन्यो । त्यसपछि फेरि म-यो ।
‘म माछा खान्न ।’ – धेरैबेर टोलाएपछि मैले युवतीलाई भनेको थिएँ ।
ऊ मेरो नजिकै आई । एक मिनेटसम्म मलाई चुम्बन गरिरही । मरिसकेको माछाले फेरि एकपटक आफ्नो पुच्छर हल्लायो । मैले आँखा बन्द गरें ।
‘भोलि केही माछाहरूले तपाईलाई घर लैजानेछन् । पोखरीबाट निस्केपछि घर जानुहुनेछ । हाम्रो सङ्ग्रहालयमा आउँदै गर्नुहोला ।’ – उसले यत्ति भनी ।
मैले युवतीका आँखामा धेरैबेरसम्म हेरिरहें । उसका आँखामा मैले भूतपूर्व प्रेमिकाको छायाँ भेट्याएको थिएँ । उसको मुहार कतै देखेको जस्तो लागिरहेको थियो । एक्कासी हामी दुवैका आँखा रसाए । के ऊ मेरी प्रेमिका थिई । मैले त्यतिबेला मेरो आफ्नो अनुहारको आकृति नै भुलिसकेको थिएँ । पुस २३, २०७३ मा प्रकाशित